Mobile House: 91 PC Suite for iPhone
ဒါလေးကတော့ apps & game သွင်းမလား ၊ contact name တွေ backup ဆွဲ ထားမလား ။တခြားအများ ကြီး သုံးရပါသေးတယ် ။android နဲ့ window ဖုန်း တွေ အတွက် လဲ သက်သက် တင်ထားပေးပါတယ် ။
ဒါလေး က တော့ Ipohne အတွက် ပါ
လိုချင်ရင်အောက် မှာဒေါင်းလို့ ရပါတယ် ။
ဆက်လေ့ လာကြည့် လိုက်ပါ ။ကြိုက်သွားမှာပါ .......
သုံးမယ်ဆို ရင် English လိုအရင် ပြောင်း ဖို့ အတွက် အောက်မှာ ပြောင်းနည်းကြည့် လိုက်ပါ ။
How to Change PC Suite's Language from Chinese into English
PC Suite can auto choose installed language by PC's Language, but sometime it's still Chinese, and that will bother the Users who can't read Chinese, Here is the step by step guide to tech you How to change language
1. find this icon in your PC Suite
2. then click this little arrow
choose the "é€‰æ‹©è¯­è¨€" and tick the first â€œè‹±è¯­(ç¾Žå›½)means English.
4. Last step click "æ˜¯(Y)" and itâ€˜ s done !
သုံးနည်းကိုတော့ မြန်မာလိုမပြန်တော့ ပါဘူး ။သုံးရတာလွယ်ပါတယ် ။ Eng လို ဖတ်ချင်ရင် တော့
Posted by Mobile House at 9:42 AM
Samsung Android ဖုန်းမှာ root မလုပ် ပဲ မြန်မာဖောင်...